InMoment Study na-ekpughe Igodo isii a na-atụghị anya ya na Nhazi | Martech Zone
Ndị na-ere ahịa jikọtara ahụmịhe nkeonwe na mgbasa ozi ezubere iche nke ọma ebe ndị na-azụ ahịa jikọtara ahụmịhe ndị ahịa ha (CX) na nkwado na ịzụrụ ihe. N'ezie, 45% nke ndị na-azụ ahịa na-ebute ụzọ inwe ahụmịhe ahaziri iche maka nkwado mmekọrịta n'etiti ndị na-eme ahịa ma ọ bụ ịzụta usoro nkeonwe.
Achọpụtala oghere ahụ ma dee ya n'ụzọ zuru ezu n'ọmụmụ ihe mba ụwa ọhụrụ site na InMoment, Ike nke mmetụta na nke onwe: Otu Brandkpụrụ Ga-esi Ghọta ma Zute Ndị Ahịa Atụrụ. Na mba ọ bụla e nyochara, ụdị na ndị ahịa anaghị adakọ mgbe a jụrụ ha gbasara ịhazi onwe. Nchọpụta ahụ na-arụtụ aka na nsogbu na ohere gbasara ịhazi onwe.
Ọ bụ ezie na e nwere ọdịiche dị iche iche site na mba ruo na mba, ndị ahịa ụwa zuru oke karịa ha dị iche. Ha choro ka ndi ahia chebe nkwa ha ma gbalita ike hazie nkwado ha n’enye ndi njem. James Bolle, VP, Isi nke Ọrụ Ndị Ahịa, EMEA na InMoment
Nke a na - arụtụ aka na esemokwu anyị na - anaghị eti maka oke - azụmaahịa dabere na atụmanya nzute ngwaahịa na ngalaba ndị ahịa na - enye nkwado pụrụ iche. Ọ bụrụ na enweghi nke abụọ, na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọ ga-enwe mmetụta dị njọ na mbọ ị na-agba n'ịzụ ahịa.
Nchoputa maka imeziwanye ahụmịhe ndị ahịa n'iji ihe eji ahazi ihe na-arụtụ aka na igodo doro anya maka ihe ịga nke ọma, mana ole na ole ga-atụghị anya ọtụtụ ụlọ ọrụ. Ndị ahịa chọrọ:
Ahụmahụ Nkeonwe - Ọ bụrụ n ’ịnakọta ozi, ndị ahịa na-atụ anya ka ị jiri data ahụ hazie izizi na nkwalite ya.
Nghọta - Branddị ga-edobe ndị ahịa banyere ụzọ esi eji nzaghachi ha iji melite ma ọ bụ gbanwee ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ.
Mmetụta Trumps Function - Iche iche ga-abụ ihe si na mmekọrịta na ahụmịhe ndị ahịa karịa nke atụmatụ ngwaahịa ma ọ bụ nhọrọ.
Nyocha ndị dị mkpirikpi, Ntị ọzọ - Nzaghachi dị mkpụmkpụ karịa na mpaghara nkọwa nke na-enye ndị ahịa ohere ịkekọrịta akụkọ n'okwu nke aka ha. Ubara ojiji nke nlekota na nchikota nke data ndi mmadu, olu, na akuko data.
Nke mbu Mobile - Gbaa mbọ hụ na 24/7 na-akwado nkwado iji lebarawanye usoro omume ndị na-azụ ahịa na-arịwanye elu.
Nyocha ndị a tụkwasịrị obi na ntanetị - Branddị na-enyere ndị na-azụ ahịa aka ịhụ ozi ndị ọgbọ ka mma gbasara ịzụta mkpebi site na ịkwado nyocha ndị a gosipụtara na ntanetị.
Ọmụmụ ihe ahụ gụnyere nzaghachi nke ndị ahịa 20,000 na ụdị 10,000 sitere na mba 12, gụnyere Australia, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, New Zealand, Norway, Spain, Sweden, United Kingdom na United States. Akụkọ ahụ na-aza ajụjụ benchmark isii na mgbakwunye, ma na-enyocha ọrụ nke onwe na mmetụta uche na mmekọrịta ndị ahịa na ndị ahịa.
Budata Nkwupụta Ozi InM zuru ezu
InMoment ™ bụ igwe ojii nke dabeere na ahụmịhe igwe ojii (CX) njikarịcha nke na-enyere ụdị aka ịme ka ndị ahịa na ndị ọrụ were mara ihe iji kọwaa mkpebi azụmaahịa ka mma, ma mepụta mmekọrịta dị elu.
Tags: ụdịatụmanya ndị ahịaahụmahụ ahịacxnnweta datammetụta ucheọkụkeonweNkwado ngwaahịaatụmatụ nyocha